Mayelana nathi - Sand futha, Sump Pump, Gravel Pump Umkhiqizi
JP Metal nethulusi Co., Ltd yasungulwa ngo 2006, kuyinto enkulu professional zobuchwepheshe futha ezimbonini nomkhiqizi wahlanganyela ekucwaningeni uthumela slurry futha, ukugqoka futhi ukugqwala izinto ukumelana OEM ukucubungula. JP futha iqembu ihlanganisa ezingaphezu kuka 40000 square metres, inhlokodolobha bhalisiwe kuyinto 18 million yuan. Kuyo yonke le minyaka ngamandla eqinile futhi umqondo abantu ngamakhasimende, Esikuncela inqwaba ukuphathwa eliphezulu neziphiwo lobuchwepheshe. abasebenzi elikhona kubantu abangaphezu kuka-220, iningi labo 30% kukhona uchwepheshe. Ngaphandle kwalokho, JP futha iye okuthiwa njengoba yesifundazwe eziphambili brand odumile futhi kwezesayensi nakwezobuchwepheshe emisha ibhizinisi. ISO9001 Kwasetshenziswa: 2008 ukuphathwa izinga uhlelo, JP futha waklonyeliswa isihloko Hebei kwagezi nokuvikelwa ibhizinisi kwemvelo. Nge ukunwebeka baqhubeka esikalini, inkampani yethu isibe ngobukhulu slurry futha supply ayehlala kuwo lapho ekuleso umkhakha efanayo e Shijiazhuang.
JP futha ine kweminyaka eminingi isipiliyoni esiwusizo ekuthuthukiseni nokusebenzisa slurry futha. Kususelwa ethula futhi iyavuleka angaphandle zobuchwepheshe obuphambili, uchungechunge umkhiqizo ukusebenza ephelele futhi Ukusabalala sesakhiwe. Njengamanje, imikhiqizo okuyinhloko kuhlanganisa uchungechunge slurry futha, FGD ubunjiniyela futha ekhethekile, amatshe futha, Dredging futha, froth futha, amakhemikhali futha asanda kwakhiwa PU zenjoloba. Amakhulu onobuhle, ezisetshenziswa kakhulu ezimayini, yokusansimbi, amalahle wokuwasha, amandla kagesi, flue igesi desulfurization, Dredging, amanzi ubunjiniyela, petroleum namakhemikhali umkhakha, ekuphathweni komasipala, ukuvikeleka kwemvelo, ukwelashwa indle kanye nezinye izimboni.
endaweni yethu zokukhiqiza ihlanganisa indawo ka 24000 square metres, inani ukukhiqizwa nomthamo ikhiqiza iziqhumane kuyinto amayunithi 10000 (amasethi), kanye ikhiqiza iziqhumane zonke izinhlobo chromium okusezingeni eliphezulu ingxubevange Castings is 2000 tons.The ukukhiqizwa endaweni ihlukaniswe ngezigodi ezinhlanu Kwenye indawo futhi izikhungo ezimbili, okuyinhlangano isikhunta thusi, ukwelashwa ukushisa, machining esihle, ziqhubekele Welding nasemhlanganweni enamathela ezindaweni ezinhlanu ukukhiqizwa; eseqedile izingxenye ezisele; izinga ukuhlaziywa namanzi isilingo. Indaba eyinhloko imikhiqizo: A05, A49, A33, A51 nezinye chromium okusezingeni eliphezulu ezimhlophe cast iron.
Ukuthuthukiswa design umkhiqizo kanye nenqubo ukulungiselela ubamukela CFD futhi Capp ubuchwepheshe. Ukuhlolwa ukunemba wokungcola ophezulu test esiteshini isesikhathini ISO9906 ezingeni ngokunemba, ukusekela ezihlukahlukene ephezulu ukucacisa zisetshenziselwe ukuhlola imishini, amathuluzi analytical futhi usakaze on.All ngakho zamukele phenolic futhi ekubumbeni. Phakathi naleso sikhathi ukuze sithuthukise izinga uhlelo slurry futha, JP futha wethula ubuchwepheshe obusha baye balahlekelwa Foam ekusakazeni. Ukusebenzisa ithekhniki le, le maholoholo ebusweni asakazwe ongafinyelela Ra3.2 ukuze 12.5μm; ubukhulu thusi ongafinyelela CT7-9; nesabelo machining for lungene 1.5 ukuze 2mm. Ukuxoshwa ayinakho flash, Burr futhi okusalungiswa, oqinisekisa izinto futhi ukubonakala slurry futha izingxenye. Ziphethe 1 amathani, amathani 2, amathani 5 imvamisa Lesisemkhatsini esithandweni, singakwazi akhiqize amathani 8-10 ekubunjweni kanye nesikhathi. ukwelashwa ukushisa workshop uzihlomisa amabili 20 cubic ukumelana-uhlobo esithandweni ukwelashwa ukushisa. Iningi amathuluzi umshini kukhona CNC e machining workshop, futhi kukhona 4.2M futhi 4.5M lathe mpo futhi angaphezu kuka-20 amayunithi umshini amathuluzi. Ngaphezu kwalokho, kukhona izinhlobo ezahlukene imishini kokusiphakamisela, ukuzisika metal kanye nemishini Welding, impeller ezingeni imishini Tuning, imishini udini, sandblasting wokucwebezelisa imishini ukuqinisekisa umthamo production.
JP futha nokobana ngokugcwele ISO9001 management system futhi agcine inqubo ukuhlolwa. Amarekhodi Quality ukuhlolwa ayatholakala kuzo zonke izinqubo zokukhiqiza. amathuluzi Professional zihlanganisa uHlelo LweDeskithophu Ekude, analyzer metallographic, icala umtshina, mechanical test umshini (uhlobo, umthelela, ubulukhuni), flowmeter kazibuthe, ingcindezi gauge, ammeter, imitha vibration, imitha umsindo, wokubacindezela ijika zokuhlola software okhokhelwayo. Ukuthola Perfect uqinisekisa izinga imishini ukuqinisekisa ukuthi ngamunye amaphampu nezingxenye kukhona ngokugcwele kuhambisana nezidingo.
JP futha sandile zonke emakethe yasekhaya eChina eminyakeni engaphezu kwengu izifundazwe 30 kanye nomasipala. Futhi iye yasetshenziswa ngempumelelo emazweni 20 umugqa .Okokuqala abasebenzi global babe isipiliyoni lochwepheshe ukuze sifake amakhasimende. inkonzo Oku-ukudayiswa: kuhlangene izimo zokusebenza langempela, singahlinzeka amasevisi Consulting kanye nomklamo uhlelo enengqondo kunazo zonke. Ngo ukudayiswa amasevisi: ikhasimende ngamakhasimende, sinikeza ukuhlolwa, kweso kanye ukuguqulwa design plan. Ngemva-ukudayiswa service: sinikeza ukuhlinzekwa kuhlanganise ukufakwa nokubeka esimweni imishini, ukuqeqeshwa kwabasebenzi, izingxenye ezisele ukunikezela kanye namanye amasevisi.
Umqondo Ukuthuthukiswa kwamabhizinisi :
Ukuze amabhizinisi: abantu ngamakhasimende
Ukuze imikhiqizo: njengoba okuqinile njengoba nje namadwala
Ukuze emakethe: emisha kahle
Ukuze ikhasimende: njalo
JP futha iye ukunamathela ubuqotho, emisha, ukusebenza kahle, ukubambisana umoya futhi "sakhele amakhasimende" ibhizinisi ifilosofi. abangane wamukelekile ukuba uvakashele ifektri futhi babheke phambili ekusebenzeni nawe ukwakha ikusasa elingcono.